2021 / 01 / 15 1232
बाथरूम बिजनेस स्कूल २०२०-११-१। बाल्यावस्थादेखि वयस्कतासम्म नुहाउने खाडलहरूको सन्दर्भमा, यो कुरा भन्न दुखद छ। नुहाउने ठाउँमा, यो पत्ता लगाईयो कि तातो पानी छैन! जे भए पनि, ...
2021 / 01 / 11 1730
बाथरूम बिजनेस स्कूल २०२०-११-२2020 बाथरूम दैनिक प्रयोगका लागि अधिक प्रयोग हुने ठाउँको रूपमा। डिजाईनमा, यदि तपाईले राम्रो समयको रूपमा हेरिरहनु भएन भने, तपाई धेरै अप्ठ्यारो पनि महसुस गर्नुहुनेछ। त्यसो ...
2021 / 01 / 11 1580
बाथरूम बिजनेस स्कूल २०२०-११-२2020 स्नान, हामी प्रत्येक दिन प्रयोग गर्छौं। तर के तपाईंले पाउनुभयो कि समय अवधिको लागि प्रयोग गरिएको शॉवरहेड पहेंलो स्केलको दागले भरिएको छ? यो न केवल धेरै फोहोर मात्र देखिन्छ तर ...
2021 / 01 / 11 1538
बाथरूम बिजनेस स्कूल २०२०-११-२2020 बाथरूम र भान्छाघर, घरको सबै भन्दा बढी प्रयोग हुने ठाउँ। तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा, बाथरूम बढी जटिल वातावरण हो। र सजावट धेरै इम्पो छ ...
2020 / 12 / 12 1861
बाथरूम बिजनेस स्कूल धेरै ग्राहकहरूको लागि एउटा घर किन्नु सजिलो छैन, र मर्मत गर्नु कुनै पनि सजिलो छैन, र तिनीहरू भित्र जान खुसी छन्! तर आफन्त र साथीहरूले भने कसरी तपाईंको शौचालय आधार क्र्याक हुन्छ ...
2020 / 12 / 12 1325
Ou Xiaowei बाथरूम बिजनेस स्कूल बिहान सबेरै र हतारमा सबै प्रकारका असुविधाहरू ~ ~~ जब दाँत धुने र ब्रशको लागि निचोल्दै। के तपाईंले कहिल्यै यस्तो किसिमको समस्या अनुभव गर्नुभएको छ ...
2020 / 12 / 05 1920
बाथरूम बिजनेस स्कूल बाथरूमलाई उनीहरूको कार्यहरूको आधारमा स्नान क्षेत्र, शौचालय क्षेत्र र ग्रुमिंग क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ। केवल नुहाउने क्षेत्र सबैभन्दा आर्द्र हुन्छ, त्यसैले यो आवश्यक छ ...
सबैभन्दा उत्तम भान्छा सिink्क नल कुन हो?
2020 / 12 / 03 1394
एक गुणवत्ता नल केवल टिकाऊ र सफा गर्न सजिलो हुनु हुँदैन, तर सुन्दर र फंक्शनल पनि हुनुपर्छ। तलको भान्साको नलगाले भर्खरको अभिनव कम्पोनेन्टहरू र सुरुचिपूर्ण फिनिश ...
भान्छाको नलको उत्तम ब्राण्ड के हो?
2020 / 12 / 03 1339
अमेजनमा केहि प्रतिष्ठित र सस्तो ब्रान्डहरू: WOWOW, Ufaucet, KINGO HOME। केहि लोकप्रिय भान्छाका नलहरू: मोन, डेल्टा, अमेरिकी मानक, कोहलर, क्रस बजारमा, नल दामfमा दायरा ...
2020 / 11 / 09 1178
किचनको नल बदल्ने वा स्थापना गर्ने, तपाईं लगभग समान प्रक्रियाहरू मार्फत जानु पर्छ। जे होस् भान्छाको नल स्थापना गर्नु यो प्रतिस्थापन भन्दा केहि सजिलो छ। तर, किचनfको सट्टामा ...
2020 / 11 / 09 1228
तपाईले हराउनु भएको कुरा पहिचान गर्न गार्हो हुन्छ जब सम्म तपाई एक उन्नत किचेन faucets को लागी बदल्नु हुन्छ। त्यहाँ धेरै प्रकारका छन्, टच एक्टिभेसनबाट मोशन सेन्सर faucets सम्म। तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ...
2020 / 11 / 08 1672
विशाल बहुमतको लागि, भान्सा पकाउने ठाउँ मात्र होइन। वास्तविकतामा, हामी हाम्रा किचनहरू अनावश्यक, मिलिling्ग, चिन्तनको लागि प्रयोग गर्दछौं। हालको भान्साइहरू थप रूपमा अर्केस्ट गरिएको छ ...